चुनावमा भाग लिनु भनेको आफ्ना मुद्दा छोड्नु होइन : उपेन्द्र यादव | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
चुनावमा भाग लिनु भनेको आफ्ना मुद्दा छोड्नु होइन : उपेन्द्र यादव
मधेशको ‘सेन्टिमेन्ट’विरुद्ध चुनावको पक्षमा उभिँदा राजनीतिक रूपमा जोखिम महशुस गर्नुभएको छैन ?
देश र जनताका लागि राजनीति गर्ने हो भने नेतृत्वले जहिले पनि जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ । त्यत्रो संघर्षपश्चात् प्राप्त गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आदि राजनीतिक उपलब्धि खतरामा पर्ने देखेपछि जोखिम मोलेर चुनावको बाटोमा उभिएको हुँ । कसले भन्यो मधेशमा चुनावविरोधी मनोविज्ञान छ भनेर । प्रस्ट पार्न चाहन्छु, मधेशको सेन्टिमेन्ट चुनावकै पक्षमा छ ।
पहिले तपार्इं आफंै संविधान संशोधनबाट मधेशका मुद्दा सम्बोधित नभई चुनावमा नजाने भन्नुहुन्थ्यो । कसरी फेरिनुभयो ?
निश्चय पनि मधेशीसहित आदिवासी जनजाति सबै समुदाय संविधानबाट ठगिएका छन् । त्यो कुरा मैलै भनिराख्नै पर्दैन, सबैलाई थाहा छ । तर, कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय सवालहरू अहम् रूपमा आउँछन् । फेरि, चुनाव पनि त आन्दोलनकै मोर्चा हो, जहाँ जनता बलियो हुनेछ । चुनावमा भाग लिनु भनेको आफ्ना मुद्दा छोड्नु होइन ।
तपार्इंहरूले त प्रचार पनि गर्नसक्नु भएन । कार्यक्रम बिथोल्ने सीमापारिकै मान्छे हुन् त ?
हामी मधेशमा त्यति कमजोर पनि छैनौँ, यसमा थप कुरा नगरौँ । मूल कुरा सिंगो मुलुकको आवश्यकता के हो ? चुनावबाट जनताको अधिकार नै स्थापित हुने हो । यो लोकतान्त्रिक विधि पनि हो । यसबाट किन हट्ने ? राज्यले मधेशका मुद्दाहरूमा जुन बेवास्ता गरेको छ, त्यसमा पनि खबरदारी गर्न छोड्ने होइन । आन्दोलन र चुनाव दुवै मोर्चामा हामी अग्रपंक्तिमै हुन्छौँ ।
मधेशमा देखिएको अस्थिरता र अशान्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
समस्याको जड संविधानमा मधेशीका अधिकार सम्बोधन नहुनु नै हो । जबसम्म यसको संशोधनमार्फत् पुनर्लेखन हँुदैन समस्या समाधान हँुदैन । राज्य पुनर्संरचनाअन्र्तगत संघीयताको छिानोफानो नभएसम्म असन्तुष्टका स्वर उठिरहन्छ ।
मधेशकेन्द्रित दलहरू भित्रै धु्रवीकरण बढेपछि मधेशका मुद्दा कमजोर हुँदैन ?
मधेशको मुद्दामा प्रस्ट हुनुपर्छ । अहिले राजपा र फोरमबीच तिक्तता बढाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यसलाई आपसी समझदारीबाट हटाउनै पर्छ ।
यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । तर, यसको शुरुवात राजपाले गरेको हो । त्यसकारण विश्वासको वातावरण बनाउने जिम्मा पनि राजपाकै हो ।
Posted by admin on Jun 18 2017. Filed under Breaking News, अन्तरवार्ता, पत्रपत्रिकाबाट, फोटो. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
2 Comments for “चुनावमा भाग लिनु भनेको आफ्ना मुद्दा छोड्नु होइन : उपेन्द्र यादव”
SB3R6D Looking forward to reading more. Great blog post.Much thanks again. Awesome.
I just want to tell you that I am newbie to weblog and certainly enjoyed your page. Most likely I’m want to bookmark your website . You certainly come with outstanding articles and reviews. Appreciate it for sharing with us your web page.